आऊ, तिमी र म एउटै शब्दकोश पल्टाउँ ! | OnlineChautari.com
आऊ, तिमी र म एउटै शब्दकोश पल्टाउँ !
June 2, 2016 | 12:13 pm
सिड्नी । देशमा केहि नदेखेर विदेश पलायन भयौ, बिदेशिएर राष्ट्रबादका कुरा नगर, तिम्रा यी वाक्यहरुलाई दोहोर्याएर अनि तेहेर्याएर पढे मैले । यस्तै धेरै आक्रोश अनि गालि गलौज सामाजिक संजालबाट सुन्दै आएको छु । ति हरेक शब्दले मुटुमै घोच्छन तर सायद तिमीले स्वाद फेरेको महसुस गर्छौ होला । मैले प्रतिउत्तर गरेर तिमीलाई सम्झाउन जरुरी देखिन तर पनि मनमा खड्कीरह्यो। सामाजिक संजालबाट मैले देश प्रति चासो दर्शाएका हर लेख अनि स्टाटसमा यस्तै व्यंग्यात्मक तथा आक्रोशपूर्ण टिप्पणीहरु पाएँ।
के म साँच्चै देशमा केहि नदेखेर बिदेशिएको हो त ? खै बुझेको तिमीले, म त देश देखेर बिदेशिएको हुँ । हो म बिदेशिएको पक्कै छु तर ‘पलायन’ भएको होइन । सायद पलायन शब्दको अर्थ तिम्रो र मेरो शब्दकोशमा फरक भएर हो कि म आफुलाई पलायन भएको मान्दिन ।
म एउटा विकसित देशमा बसेर गरिब अनि अल्पविकसित देश नेपालमा मेरो अस्तित्व खोजिरहेछु। म हरपल नेपाल सोच्छु अनि नेपाल बोल्छु, नेपाल दुख्दा मलाई दुख्छ । के यसलाई पलायन भएको भन्न मिल्छ र ? अनि तिम्रो बुझाइमा राष्ट्रवाद भनेको चाँही के हो ? के केहि नगरी हल्लिएर फेसबुक चलाउँदै नेताहरु अनि बिदेशिएकाहरुलार्इ तथानाम गालि गर्नुलाई तिमी राष्ट्रवाद भन्छौ ?? आऊ तिमी र म एउटै शब्दकोश पल्टाउँ, अनि मात्र हाम्रा शब्दले एउटै अर्थ देलान । नत्र न मलाई यहाँ कुनै बाध्यता छ नेपालको बारेमा बोल्न, न म नेपालको बारेमा बोले बापत कसैले तलब दिन्छ । काम, पढाई अनि परिवारलार्इनै सँगै समय दिन गार्हो हुँदा पनि म देशको बारेमा सोच्ने हैसियत राख्छु अनि यसैलार्इ मेरो कर्तब्य ठान्छु । म एउटा आम नेपाली र नेपालको बारेमा चासो राख्छु, तिमीले भन्दा धेरै । म यहाँ एस आरामले जिउन सक्छु । त्यहि अनुसार मेरो परिवार जिउन सक्छ। तर म मेरो देश पनि यस्तै विकसित भएको हेर्न चाहन्छु । के मलाई मेरो देशको बारेमा सोच्ने अधिकार छैन, बोल्ने अधिकार छैन ?
तिमीको हौ मेरो देश प्रतिको चासोमा औंला उठाउने ? झन्नै दश ओटा देशका भाषा सिकेर २ दिन लाम बसेर विभिन्न देशका फारम अनि डिभि भरेर कतैको भिसा नलागेर हार मानेर बसेको तिमी, केहि गर्न खोज्नेका खुट्टा किन तान्छौ ?
देशको अर्थतन्त्र जति झन्डै रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ, अनि गालि तिनै बिदेशिएकालाई गर्नु ? तिमीलाई थाहा छ, म यहाँ दुःख गरेर पनि नपुगेर बैंकको ऋण काडेर कलेज फि तिर्छु । मेरा बुढा बालाई ऋण माथि ऋण थपिँदो छ । मेरा बा आमाले पनि सुखको सास फेर्न पाउन भन्ने त म पनि चाहन्छु, तर पनि त्यो भन्दा अघि म ति भोका, नांगा अनि पिडाले छटपटाइरहेकाले बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने सोच्छु । त्यसैले हरेक महिना कुनै न कुनै रुपमा नेपालीलाई नै हजारौंको सहयोग गरिरहेको हुन्छु । तर पनि दोषी तिमी मलाई नै नराम्रो देख्छौ । तिमी आफै बेरोजगार छौ अनि मलाई नेपाल आएर काम गर भन्छौ ? तिमीले देशमा बसेर के चाहिं ठुलो काम गर्यौ र मेरो देश प्रतिको निस्वार्थ मायामा औंला उठाउछौं ?
तिम्रो प्रतिउत्तरको आशा त गर्दिन तर एउटा अनुरोध फेरी गर्छु आऊ तिमी र म एउटै शब्दकोश पल्टाउँ जसले देशप्रतिको कर्तव्य बुझाओस अनि समृद्ध नेपालको अर्थ सिकाओस।